Ukuntywila kwi-pellet yentlanzi e-Negeria kukutya kweentlanzi
Amafama e-Catfish eNegeria okwangoku axabana ngokunyuka kweendleko zokutya, elekelele iindleko zeemveliso kwilizwe liphela. Abanye babalimi bathi banokuphinda bayiqwalasele ngokutsha indlela abatyala ngayo kwimveliso yeentlanzi.
Izithako eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukondla zokwenza i-pellets zamanzi amdaka zokutya ziziinkozo,idayisi yerayisi enomthi, ingqolowa, ikhekhe lecottonseed kunye necake enamandongomane.iya kuba yexabiso eliphantsi ukwenza iipellets ngokokwazo.Onye umlobi weentlanzi uyalele umatshini ukuba wenze iipellet zeentlanzi zizodwa. ,ingathengiswa nangabanye abalimi beentlanzi .
Zethu intlanzi itya ukutya okunegwele zinokwenza ukutya kweentlanzi kube kukutya kweentlanzi kunye nokutya kwezilwanyana,.iyakwazi ukuqhubekisa ingqolowa,umgquba,isidlo sangokuhlwa,alfalfa,irayisi husk,isidlo sengca,ijongilanga yokondla i-pellets.it ngokufanelekileyo, ukusetyenziswa okuphantsi, ukusebenza okuzinzileyo, njl., kungoku nje isetyenziselwa izixhobo zokwenza ukutya.